Allegri oo doonaya in habeen dambe ay 3-da dhibic ka qaataan Dinamo Zagreb – Gool FM
Allegri oo doonaya in habeen dambe ay 3-da dhibic ka qaataan Dinamo Zagreb
Liibaan Fantastic September 26, 2016
(Torino) 26 Sebt 2016 Kooxda Juventus ayaa habeen dambe u safri doonta dhigeeda Dinamo Zagreb kulan ka tirsan wareega guruubyada ee koobka horyaalada yurub.
Juventus ayaa barbaro ku bilaabatay wareega guruubyada kadib markii ay garoonkeeda 0-0 kula gashay kooxda Sevilla, taas oo ka dhigaysa lama huraan inay guul ka gaaraan Dinamo Zagreb.
Tababare Allegri ayaa sheegay in kooxdiisa ay waajib ku tahay inay 3-da dhibic ka qaataan kooxda Zagreb inkasta oo uu qiray adayga kulamada Champions League ee banaanka.
“Aan qaadano seddexda dhibic kadibna waan arki doonaa (guruubka intiisa kale)” ayuu yiri Massimiliano Allegri ka hor kulanka habeen dambe.
“Waqtigaan la joogo ma garan karo dhibcaha lagu gali karo booska koowaad iyo kan labaad, waxaan ognahay oo kaliya in barri uu nasugaayo kulan adag waayo marwalba way adagtahay inaad ka ciyaarto yurub”.
“Inaad guul gaarto kulamada aadan ku ciyaarayn gurigaaga marwalba waa kuwo adag, barri waa inaan howsha si sax ah u qabanaa, intaas ka hor waa inaan 3-da dhibic u qaadanaa gurigeena anaga oo soo bandhignay qaab ciyaareed fiican”.
"Liverpool way ku guuleysan kartaa Premier League kal ciyaareedkan".